Tartankii qaryaan dhoodaan
daawo tartankii qaryaan dhoodaan ee lagu qabtey wardheer
saabuun cadar nimco dareen
daawo dhaantadii saabuun cadar ee nimco dareen
nafaqo dhaantadii axmed budul
daawo dhaantadii nafaqo ee abwaan axmed budul
Nabadi Waa Door: Nabaddu Waa Dahab Mudan In La Doorto, Waana Danta Ummadda. By: Maxamed C. Gurxan
Labada magac guud ee “Nabad iyo colaad” waa kuwo aad u da’ wayn, lana kowsaday jiritaanka aadanaha. Ka hor intaan taariikhda la qorin, xilli-taariikheedyada loo yaqaanno “Waayadii arahsiga” iyo “Waayadii ugaadhsiga” dadka waa ay dhexmari jireen colaad iyo nabad labaduba, balse hadba midka ay doortaan labada qolo ee is haysaa, ayay dhaqayadeed maali jireen. Kuwa colaadda doorta, waxay u badnayd, in ay labaduba tirtirmaan ama in midkood la jabiyo oo la gumeeyo. Kuwa nabadda doorta, waxay u badnayd, in labaduba badhaadhaan oo nabad ku wada noolaadaan. Waayadaas, aaladaha iyo xeeladaha dagaal ee la adeegsan jiray waxay ahaayeen kuwo waxyeeladoodu aad u yar tahay, una kooban tahay.
Taariikhda la qoray, xilliga loo yaqaanno “Waayadii hore” waxaa ku xusan ummado iyo qabaa’il tirtirmay, sababta ugu wayn ee baaba’oodana ay ahayd colaad iyo masiibooyin laga dhaxlay khilaafkaas. Waxaan tusaale u soo qaadan karnaa ummadahaas suulay: Boqortooyadii dadkii Maaya ee Koonfurta Ameerika oo tirtirantay abaara sannadkii 909 C.D. iyo qabaa’ilkii Anasasi, Mesa iyo Hohokam ee Waqooyiga Amerika oo iyana jiritaankoodii lumay intii u dhaxaysay 1100 – 1500C.D.
Colaad waa khilaaf dhexmara dad, oo af iyo addinba la isku waxyeeleeyo. Colaaddu marka ay gaamurto, dhinacyada is hayaa sida badan, waxyeello isuma reebtaan. Dhibka colaadda iyo dagaalanku keenaan, sida dadka qaar u yaqaan, ma aha rag dhinta ama dhaawacma oo kaliya, balse colaadda, haddii aan la dabaqaban, waxay leedahay saamayn badan oo kale, oo qaar durba laga soo kaban karo, qaarna ay adag tahay sida looga soo waaqsadaa. Bal aynu isla eegno dhawr arimood oo ka mid ah saamaynta iyo raadka ay colaaddu ku yeelato dadka iyo deegaankoodaba:
Ammaanka iyo caddaaladda.
Marka ay meel tahay goob colaadeed waxaa luma ammaankii iyo caddaaladdii bulshada. Dambiile kasta oo qof dila ama gabadh kufsada ama dad dhaca ama hanti dawladeed lunsada wuxuu fursad u helayaa inuu baxsado oo ku biiro kuwa nabad-diidka ah, wuxuuna halkii ka sii wadaa dambiilenimadiisii isagoo garab ka helaya kuwaa uu la jaalka noqday.
Waxaa ku adkaanaysa dadka shacabka ah inay si nabad ah isaga dhex gooshaan degmooyinka iyo gobolladooda. Waxaana adkaata in sharciga siduu ahaa loo fuliyo.
Ammaan daradu waxay keentaa barakac bulsho. Dadka shacabka ah, gaar ahaanna kuwa maatada danyarta ah, oo nolol-maalmeedkooda ku soo saarta muruqoodu, uma adkaysan karaan colaadda. Waxayna u dagaagaan hadba meeshii nabad ah ee ay u arkaan inay ka heli karaan nabad iyo nolol. Barakaca bulshada ee noocan ahuna wuxuu saamayn ku yeeshaa inay colaaddu sii daba-dheeraato.
Waxaynu wada ogsoon nahay in meesha ay colaadi ka jirto uusan ka jiri karin horumar dhaqaale oo taabbagal noqon kara. Dagaalku wuxuu baabi’iyaa ama yareeyaa waxsoosaarka beeraha iyo xoolaha iyo ganacsigaba. Waxaa istaaga ama yaraada socodka gaadiidka. Waxaa istaaga ama jiitama mashaariicda horumarita sida: dhismaha jidadka; biyo-xidheenada iyo warshadaha; hirgalinta mashaariicda beeraha; xoolaha. Dadka wax haystaayu way kala tagaan hantidooda halkaas; mana jirayso maalgalin hantiilayaasha gudaha ama kuwa dibaddu ay ka samaynayaan goobtaas colaadeed. Socotada, sida booqdayaasha ama dalxiisayaasha, oo dakhli badan laga helo, iyana ma tagaan goob colaadeed. Nolosha bulshaduna cidhiidhi ayay gashaa.
Colaaddu saamayn aad u ballaadhan ayay ku yeelataa adeegga bulshada. Haddii aanay meeli nabad ahay way adag tahay in si fiican looga hirgaliyo adeegyada caafimaadka; waxbarashada; isgaadhsiinta; gaadiidka; iwm. Waxayna goobtaasu noqotaa go’doon, iyadoo uu ku yimaaddo dibudhac dhan kasta saameeya bulshada markaas iyo mustaqbalka fogba. Sidoo kale, colaaddu waxay saamayn ku yeelataa habsami u socodkii maamulka iyo hawlihii loo hayay bulshada.
Dhulka ay colaadi ka jirto waxaa lagu yaqaanaa shaqo la’aan ku baahsan bulshada. Dadku, gaar ahaanna dhalinyaradu, marka ay shaqo la’aan yihiin waxay billaabaan inay isticmaalaan mukhaadaraad kala duwan. Waxaa aad ugu bata magaalooyinka sigaar cabidda iyo qayilaadda jaadka; iyo waliba qaar billaaba inay khamriga cabbaan. Sidoo kale, waxaa bata macsida; beenta; tuugada; iwm. Waxaana guud ahaan calwa dhaqankii suubanaa ee bulshadu lahayd. Shaqo la’aantu, waxaa kaloo ay dhalinyarada bartaa, waxa loo yaqaanno shaxaadka, oo ah dawarsi magaca loo duway. Ugu dambaystana waxay ka dhigtaa wax matarayaal.
Saamaynta ugu wayn ee colaaddu waa midda deegaanka dabiicaga ah. Afarta arimood ee aynu soo sheegnay ee colaaddu reebto waa kuwo wakhti gaaban gudihii laga soo kaban karo, balse middan deegaanka dabiiciga ah way adag tahay in dhakhso looga soo kabto.
Ilaalinta deegaanka dabiiciga ahu wuxuu lagama maarmaan u yahay nolosha dadka, xoolaha iyo xayawaanka kaleba. Degmada ay colaadi ka jirto waxaa ku dhaca nabaadguur aan xad lahayn. Xoolo dhaqatadu waxay ku xoomaan meelo gaar ah oo ay ammaan bidayaan dabadeed xaalufiyaan dhirtii iyo daaqiiba. Waxaa si aan xad lahayn loo laayaa ugaadha, oo inta hadhaana ay ka qaxdaa meeshaas xabaddu ka jirto. Nabad-diidku si aan naxariis lahayn ayay u jaraan dhirta, iyagoon waxba u aabayeelayn. Waxay jaraan dhirta waawayn oo dhuxul ka dubaan, si ay dakhli uga helaan. Ammaanka awgeed dadka degmadu meel fog xaabo uma doontaan, waxayse xaalufiyaan kaymihii degmada ku dhawaa oo idil. Mashaariic dib u dhiraynna lagama fulin karo goobtaas.
Xaalufinta dhirta iyo daaqu waxay keentaa in ay u sahlanaato dabayshu in ay siigo kiciso. Dhulkiina wuxuu tartiib isu baddalaa lamadegaan aanay waxba ka bixin, cidina ku noolaan karin.
NABADDU WAA DANTA UMMADDA
Sida aynu ka soo sheekaynay colaaddu dan uma aha dadka, duunyada iyo deegaanka midnaba. Danta dadka iyo deegaanku waxay ku jirtaa nabadda iyo xasiloonida. Marka ay dagmadu nabad tahay, dadkeedu waxay aroortii u wada dareeraan shaqo iyo waxbarasho. Waxayna dadaal u galaan sidii ay noloshooda kor ugu soo qaadi lahaayeen dhan kastaba. Waxay dhistaan guryo iyo goobo ganacsi oo rasmi ah.
Meesha nabadi ka jirto waxaa ka jira farxad iyo rayrayn, waxaana ku badan damaashaadka xafladaha aroosyada, iidaha iyo dhalashada. Halka ay colaadi ka jirtose waxaa ku badan aasayda, tacsida, agoonta iyo naafada.
NABADDA IYO KAALINTA DAWLADDA
Dawladda Jamhuuriyadda Dimoqraadiga ee Xidhiidhka Itoobiya iyo tan Deegaanka Qawmiyadda Soomaalida labaduba waxay dadaal ballaadhan, oo aan hagar lahayn u galeen sugidda ammaanka iyo horumarinta shacbiga Deegaanka Soomaalida.
Inkastoo madaxwaynaha, hoggaanada iyo xafiisyada kala duwan ee deegaanku ay muujiyeen waxqabad iyo dadaal dheeraad ah oo lagaga shaqaynayo danaha shacbiga, haddana waxaa mudan in si gaar ah loo xuso hoggaanka caddaaladda iyo nabadgelyada iyo waliba xafiiska warfaafinta, dhaqanka iyo dalxiiska, oo si gaar ah door wayn uga qaatay arimaha nabadgelyada iyo amniga.
Tan iyo intii xilka Hoggaanka Caddaaladda iyo Nabadgalyada uu qabtay Mudane Cabdi Maxamed Cumar, wuxuu hoggaanku waxay wayn ka qabtay nabadda iyo xasiloonida. Isagoo hogaanku mudnaanta kowaad siinaya danta guud ee shacabka, ogsoonna inaan caddaalad la samayn karin nabadgelyo la’aanteed, kana duulaya maahmaahda faca wayn ee Laatiinka ah ee odhanaysa, “Si vis pacem, para bellum.” Oo macnaheedu yahay “Haddaad rabto nabad, u diyaar noqo dagaal.” Si uu nabadda u sugo, wuxuu dhisay ciidanka awoodda badan ee sida gaarka ah u tababaran loona yaqaanno Liyuu Booliiska.
Ciidanka Liyuu Booliiska, oo ka kooban dhalinyaro laga soo xulay deegaanka, oo af, dhaqan iyo diinba la wadaaga shacabku, wuxuu awood u yeeshay inuu gaadho ceel kasta iyo tuulo kasta, oo cagta mariyo maxaysatada nabad-diidka ah ee dibindaabyada ku hayay ummadda. Wuxuuna intuu ciidanku jiray ka soo hoyiyay guulo waxku ool ah oo la taaban karo ammaanka gudaha ee deegaanka.
Sidoo kale, wuxuu ciidanka Liyuu Booliisku daboolay irdaha xuduudada caalamiga ah ee deegaanku la wadaago waddamada dariska, isagoo xakameeyay dhaqdhaqaaqii dadka iyo gaadiidka sida sharci darada ah ku soo gali jiray ama kaga bixi jiray waddanka.
Xafiiska warfaafinta, dhaqanka iyo dalxiiska, gaar ahaanna madaxa xafiiska Mudane Guuleed Casoowe, wuxuu isna kaalin xoog leh ka qaatay fidinta wararka xaaladaha dhabta ah ee ka jira deegaanka iyo waliba xidhiidhinta iyo kasbashada muwaadiniinta ku nool deegaanka gudihiisa iyo kuwa qurbo-joogta ah labadaba. Wuxuu xafiisku wax wayn ka baddalay, isla markaana beeniyay dacaayadihii beenta ahaa ee ay nabad-diidku ka fidin jireen dawladda deegaanka iyo tan xidhiidhka labadaba. Wuxuuna ku guulaystay inuu xogta dhabta ah gaadhsiiyo dunida dacaladeeda oo dhan. “Xog la helaa, talo la helaaye.” Dad badan oo hore ay nabad-diidku u khaldeen markii ay xaqiiqada ogaadeen, waa ay ka soo noqdeen khaladkii, waxayna goosteen inay dawladdooda garabsadaan, danta dadkoodana ka shaqeeyaan.
Dhanka kale, dawladda xidhiidhka iyo tan deegaankuba waxay dadaal dheer u galeen sidii heshiis iyo wadahadal loogu xallin lahaa wixii dhib jira, cid kasta oo u diyaar ah in, si nabad, dimoqraadiyad iyo caddaalad ah wax loo wadaagana, waxaa loogu baaqay in ay yimaadaan miiska wada xaajoodka.
Dadaalkan ay xal nabadeed dawladdu ku raadinaysay wuxuu kasbay in jabhadda UWSLF ay miiska timaaddo, oo si geesinimo leh u doorato in khilaafkii ay ka tanaasulaan, nabadna ay u doortaan dadkooda iyo dantoodaba.
Waxaa iyana ammaan iyo bogaadin mudan golaha sare ee jabhadda ONLF, oo baaqii nabadda ee dawladda gacmo furan ku soo dhaweeyay. Waxaana ku dhiirigalinaynaa golaha sare ee ONLF inuu raaco tubta UWSLF, oo dadkiisa, dalkiisa iyo dantiisaba u doorto in mudnaanta kowaad ay siiyaan sidii wax walba nabad lagu xallin lahaa.
NABADDA IYO KAALINTA SHACABKA
Dawladdu waxay ka kooban tahay shakhsiyaad ka soo dhex baxay, oo uu soo doortay shacabka waddanku. Haddana, waa hay’adda ugu saraysa ee haysa talada waddan ama deegaan. Dawladdu waxay leedahay ama haysataa ciidan, dhaqaale, hawl-wadeenno, qalab iyo awood ballaadhan oo ay ku fuliso qorshaheeda, kuna sugto ammaankeeda.
Hase yeeshee, si hawlaha ay dawladdu u qabanayso dadkeedu ay u noqdaan kuwo taabbagala oo midhihiisa laga rabay iyo wax ka badan dhala, waxaa lagama maarmaan ah in shacabkuna uu kaalintiisa qaato, oo garab istaago xukuumaddiisa. Haddii mas’uulka dadkii soo doortayu aanay garab buuxa siin, siduu ugu qaban karaa wixii ay ka rabeen inuu u qabto?
Sidaan hore uga soo faaloonay, nabaddu waa danta shacabka. Haddana, si nabad buuxda loo helo, xilka ugu horeeya, uguna waynu wuxuu saaran yahay waa shacabka deegaanka. Wuxuu saaran yahay muwaadin kasta oo u dhashay deegaanka, kuwa dalka gudihiisa ku nool (reer guuraaga, tuulo joogta iyo degmooyinkaba) iyo kuwa qurbo-joogta ah ee dibadaha ku nool, labadaba.
Si nabad raagta loo gaadho, dadkuna uu u hiigsado horumar iyo badhaadhe, waxaa lagama maarmaan ah in dhammaan laga wada qayb qaato sugidda ammaanka. Waxaana u soo jeedinayaa shacabka deegaanka tallaabooyinkan soo socda in la qaado:
• Waa in muwaadin kastaa, isagoo naftiisa, dadkiisa iyo dalkiisa u danaynaya, uusan marnaba taageerin af, addin ama dhaqaale urur ama shakhsi nabad-diid ah oo dhib iyo hagardaamo wada;
• Waxaa la yidhi, “Saddaqadu waxay ka billaabataa guriga.” Sidoo kale, nabadduna waxay ka billaabataa guriga. Sidaa darteed, waa in shakhsi kastaa gurigiisa nabad iyo nabad jacayl ka abuuro, wax kasta iyo cid kasta oo carqalad ku ah nabaddana uu iska saaro, kana dheeraado;
• Waa in muwaadin kastaa, qaraabadiisa iyo dariskiisa uu ku waaniyo kuna dhiirigaliyo inay nabadda taageeraan, ciddii nabad-diid ahna iska caabiyaan, af iyo addinba. Haddii aysan awoodi karinna inay iska caabiyaanna, ay wargaliyaan ciidamada ammaanka ee aaggooda ku sugan;
• Waa in muwaadin kastaa uu ka feejignaado khiyaanada iyo dabinnada nabad-diidka iyo shisheeyaha ee la rabo in lagu wiiqo danaha dadkeenna;
• Waa in muwaadin kastaa uu isu xilqaano ka hortagidda iyo beeninta dacaayadda iyo barabagaandhada beenta ah ee nabad-diidka iyo cadaawaha;
• Waa in muwaadiniintu ay isku duubnaadaan, iyagoo kaashanaya dawladoodana, ay si wadajir ah uga hortagaan hujuunkii af iyo addinba ka yimaadda nabad-diidka iyo kuwa cadawga ku ah danahooda.